Supergeo abanye na mmekorita ya na GPS PL iji nye ihe ngwọta ntụgharị maka iOS - Geofumadas
Eprel, 2014 GPS / Equipment, SuperGIS
SuperGeo Technologies, kwupụtara mmemme mmekọrịta na GPS PL, ụdị ọrụ na-adọta uche na ụlọ ọrụ ọ bụla na-akwalite ụbọchị ọ bụla karia ịkwado maka ahịa, mee ka mmekorita na-achọwanye ahụmịhe maka ndị ọrụ.
Companieslọ ọrụ abụọ ahụ na-enye GIS ngwọta maka ngwaọrụ mkpanaka, ebe GPS.L na ahịa Polish emepelarị na ndokwa nke ọrụ nyocha, ọzụzụ, nkwado teknụzụ na ndepụta nke ngwaahịa ngwaike. Ọ bụ ezie na oke ya gafere ókè ya, gaa mba ndị agbata obi ya na mgbago ugwu Europe.
Ka ọ dị ugbu a, SuperGeo na-emepe ngwa GIS na ọkwa sọftụwia. Ihe ikpe SuperSurv dị ọ bụghị naanị maka ngwaọrụ gam akporo kamakwa ugbu a maka iOS. Ha abụghị nke mbụ, asọmpi ahụ siri ike ugbu a na ngwaọrụ mkpanaka dị na ejiji, njikọta na-arụ ọrụ nke ọma ma ọrụ ntanetị dị n'ịntanetị nwere ụkpụrụ kwụsiri ike. Nke a pụtara na a na-ahụta mbadamba dị ka ngwa ọrụ ọ bụghị naanị iji nweta data, kamakwa iji weghara ozi tabular n'ọhịa, jiri nkenke na ihuenyo mmetụ, rụọ ọrụ ngwugwu na data ejikọtara na sava etinyere, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Eziokwu bụ na ndị ọrụ ahụ bụ otu, ma ngwanrọ nke geolocation na ngwaike nke emebiri ya.
Mmekọrịta nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ na-achọ azịza "turnkey" nke a maara dịka 3R SuperSurv, nke ebuputara ndị Poland na ndị ọrụ Europe na mbụ. Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ mmetụta ọ nwere ike inwe na ndị ọrụ, na-amara na GPS.PL nọ na mpaghara nke akụrụngwa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ site na itinye n'ọrụ na ụgbọ mmiri, ụgbọ elu, ọrụ ugbo, oke ọhịa, gburugburu ebe obibi, nchekwa na mpaghara nnabata data izugbe ubi.
Ọ bụ ezie na ọ bụ otu nsụgharị nke SuperSurv nke a na-emegharị na ya, enwere uru bara uru na ahụmịhe a, ebe ọ bụ na ọ naghị ere mbadamba na ngwanrọ arụnyere, ndị ahịa ha na-enwe ekele maka ndị ọrụ ha maka ịbụ ndị ọrụ na ọnọdụ ọjọọ.
O kwesịghị ịbụ otu ịga ụlọ ahịa Apple ịzụta mbadamba, zụta SuperSurv na ZatocaConnect, wụnye ma rụọ ọrụ ya. N'ebe a anyị na-ekwu maka ihe ọzọ ... ndị enyi anyị Polish ga-enwe ike ikwu ya n'ime ọnwa ole na ole.
Ozi ndị ọzọ banyere SuperSurv: http://www.supergeotek.com/ProductPage_SuperSurv.aspx
Hụ ihe gbasara 3R-SuperSurv na GPS.PL: http://www.gps.pl/3r
Previous Post«Previous MDT, Ihe ngwọta zuru ezu maka nyocha na ọrụ engineering
Next Post Usoro ihe omumu na ihe omuma ihe omuma na Latin AmericaNext »